Asụsụ ndị Afrịka ka ha nweta ọtụtụ okwu sayensị - AfricArXiv
bipụtara Johanssen Obanda on 20th August 2021 20th August 2021
Anyị dị mpako ịbụ ndị apụta n'ime ya Nature n'izu a, n'akụkụ Masakhane dị ka anyị na -arụ ọrụ '' Decolonising sayensị ''.
Gụọ ụdị akụkọ a n'asụsụ French na ecomag.fr/les-langues-africaines-pour-obtenir-plus-de-terms-scientifiques-sur-mesure-ecologie-science/
Enwetụbeghị ọtụtụ okwu sayensị na -ekwukarị n'asụsụ Afrịka. Ugbu a, ndị nyocha si n'ofe Afrịka na -agbanwe nke ahụ.
Ndị nyocha chọrọ ịgbasa okwu sayensị n'asụsụ Afrịka gụnyere Luganda, nke a na -asụ na East Africa. Foto: ụmụ akwụkwọ-nkuzi na Kampala. Ebe E Si Nweta: Anya Ubiquitous/Alamy
Enweghị okwu isiZulu mbụ maka dinosaur. A na -akpọ nje amagciwane, mana enweghị okwu dị iche maka nje ma ọ bụ nje. A quark bụ ikwakhi (akpọ kwa-ki); enweghị okwu maka ngbanwe uhie. Ndị nyocha na ndị na -ahụ maka sayensị na -eji asụsụ ahụ, nke ihe karịrị nde mmadụ 14 na -ekwu na ndịda Africa, na -agbasi mbọ ike ikwenye n'okwu maka mmalite.
IsiZulu bụ otu n'ime ihe dị ka asụsụ 2,000 a na -asụ n'Afrịka. Sayensị ọgbara ọhụrụ elegharala imirikiti asụsụ ndị a anya, mana ugbu a otu ndị nyocha si Afrịka chọrọ ịgbanwe nke ahụ.Kedu ihe bụ isiZulu maka dinosaur? Kedu ka sayensị si leghara asụsụ Afrịka anya
Nchọpụta nyocha akpọrọ Sayensị Decolonise na -ezube ịsụgharị akwụkwọ sayensị 180 site na sava mbipụta AfricaArXiv gaa n'asụsụ Afrịka isii: isiZulu na Northern Sotho sitere na ndịda Afrịka; Hausa na Yoruba si West Africa; na Luganda na Amharic sitere na East Africa.
Ihe dị ka nde mmadụ 98 na -asụ asụsụ ndị a ọnụ. Na mbido ọnwa a, AfricArXiv kpọrọ maka nrubeisi site n'aka ndị ode akwụkwọ nwere mmasị ịtụle akwụkwọ ha maka ntụgharị asụsụ. Oge ngwụcha bụ 20 Ọgọst.
Akwụkwọ ndị a tụgharịrị ga -agbasa ọtụtụ ọzụzụ sayensị, teknụzụ, injinịa na mgbakọ na mwepụ. Lacuna Fund na-akwado ọrụ a, onye na-akwado ego data sayensị maka ndị nyocha na mba ndị nwere obere ego na nke etiti. Emebere ya otu afọ gara aga site na ndị ọrụ ebere na ndị gọọmentị sitere na Europe na North America, na Google.
Asụsụ ndị a hapụrụ
Enweghị usoro sayensị n'asụsụ Afrịka nwere nsonaazụ ụwa n'ezie, ọkachasị na agụmakwụkwọ. Dịka ọmụmaatụ, na South Africa, ihe na -erughị 10% ụmụ amaala na -asụ Bekee dị ka asụsụ ụlọ ha, mana ọ bụ asụsụ izizi n'ụlọ akwụkwọ - ihe ndị ọkà mmụta kwuru bụ ihe mgbochi na mmụta sayensị na mgbakọ na mwepụ.
A na -ahapụ asụsụ ndị Afrịka na mgbanwe mgbanwe ntanetị, Kathleen Siminyu, ọkachamara na mmụta igwe na nhazi asụsụ eke maka asụsụ Afrịka dabere na Kenya kwuru. “A na -ahụ asụsụ ndị Afrịka ka ihe ị na -ekwu n'ụlọ, ọ bụghị na klaasị, na -apụtaghị na ọnọdụ azụmahịa. Ọ bụ otu ihe ahụ maka sayensị, ”ka ọ na -ekwu.
Siminyu bụ akụkụ nke Masakhane, nzukọ sitere na ahịhịa nke ndị nyocha nwere mmasị nhazi asụsụ sitere n'asụsụ Africa. Masakhane, nke pụtara 'anyị na -ewukọ ọnụ' na isiZulu, nwere ndị otu karịrị narị anọ si n'ihe dị ka mba iri atọ na kọntinent ahụ. Ha na -arụkọ ọrụ ọnụ ruo afọ atọ.
Mmemme sayensị Decolonise bụ otu n'ime ọtụtụ atụmatụ ndị otu a na -eme; ndị ọzọ gụnyere ịchọpụta okwu asị na Naịjirịa na ịkụziri algọridim igwe iji mata aha na ebe Afrịka.
N'ikpeazụ, Decolonise Science bu n'obi imepụta mkpụrụedemede mkpụrụedemede n'ịntanetị nke okwu sayensị n'asụsụ isii, wee jiri ha zụọ algọridim mmụta igwe maka ntụgharị asụsụ. Ndị nyocha ahụ nwere olile anya na ha ga -arụcha ọrụ a site na mbido afọ 2022. Mana enwere nnukwu ohere: ibelata ihe ize ndụ nke asụsụ ndị a adịkwaghị ochie site n'inye ha ntọala siri ike n'ịntanetị.
Mana "anyị achọghị iwepụta okwu ọhụrụ kpamkpam", Sibusiso Biyela, onye edemede na ScienceLink, ụlọ ọrụ nkwukọrịta sayensị dị na Johannesburg bụ onye mmekọ na ọrụ ahụ. "Anyị chọrọ ka onye na -agụ akụkọ ahụ ma ọ bụ okwu ahụ ghọta ihe ọ pụtara oge mbụ ha hụrụ ya."
Biyela, onye na -ede maka sayensị na isiZulu, na -enwetakarị okwu ọhụrụ site n'ịtụle mgbọrọgwụ Grik ma ọ bụ Latin nke okwu sayensị dị adị na Bekee. Dịka ọmụmaatụ, mbara ala sitere na Greek oge ochie atụmatụ, nke pụtara 'onye na -awagharị awagharị', n'ihi na a ghọtara na mbara ala na -agagharị na mbara igwe abalị. Na isiZulu, nke a na -eme umunwanyi, nke pụtakwara onye na -awagharị awagharị. Okwu ọzọ maka mbara ala, nke a na -eji na akwụkwọ ọkọwa okwu ụlọ akwụkwọ, bụ udo, nke pụtara 'Ụwa' ma ọ bụ 'ụwa'. Okwu ndị ọzọ na -akọwa: maka 'fossil', dịka ọmụmaatụ, Biyela chepụtara ahịrịokwu ahụ amathambo amadala atholakala emhlabathini, ma ọ bụ 'ọkpụkpụ ochie achọtara n'ime ala'.
N'ọtụtụ sayensị, dị ka nyocha banyere ihe dị ndụ, ndị nchọpụta na -agbalị ịchọta okwu kwesịrị ekwesị ga -achọ ịbanye na isi mmalite okwu. Lolie Makhubu-Badenhorst, onye isi na-ahụ maka nhazi atụmatụ asụsụ na mmepe na Mahadum KwaZulu-Natal na Durban, na-ekwu na enweghị okwu sayensi sitere na data edere edeghị apụtaghị na ọ dịghị. “Edebere gị ede, edebere m ọnụ. Ihe ọmụma dị, mana edeghị ya nke ọma, "Makhubu-Badenhorst, onye na-esoghị na ọrụ Decolonise Science.
Ndị ọkachamara n'ihe gbasara mkpụrụ okwu Decolonise Science ga -ewepụta usoro maka imepụta usoro sayensị isiZulu, Biyela kwuru. Ozugbo nke ahụ mechara, ha ga -etinye ya n'ọrụ n'asụsụ ndị ọzọ.
Ndị otu a ga -enye nkọwapụta ya dị ka ngwaọrụ efu maka ndị nta akụkọ na ndị na -ekwuchitere sayensị, yana bọọdụ asụsụ mba, mahadum na ụlọ ọrụ teknụzụ, nke na -enyewanye ntụgharị akpaaka. Biyela kwuru, "Ọ bụrụ na ị mepụta okwu ma ndị ọzọ anaghị eji ya, ọ gaghị abanye n'ime asụsụ a."
Google na -akpọ maka enyemaka iji melite ogo ntụgharị asụsụ asụsụ Africa ya. Ebe E Si Nweta: Cristina Aldehuela/AFP site na Getty
Nnukwu teknụzụ: 'anyị chọrọ enyemaka gị'
Ndị nyocha Masakhane na -ekwu na ụlọ ọrụ teknụzụ ụwa na -eleghara asụsụ Africa anya, mana n'afọ ndị na -adịbeghị anya, ha amalitela itinye ego nyocha n'ọhịa.
"Anyị maara na ọtụtụ puku asụsụ Afrịka anaghị anọchite anya ngwanrọ ntụgharị," onye ọnụ na-ekwuchitere Google kwuru Nature. Nnukwu teknụzụ chọrọ ịgbasa Google Translate iji tinye ọtụtụ asụsụ Africa, gụnyere Twi, Ewe, Baoulé, Bambara, Fula, Kanuri, Krio, Isoko, Luganda, Sango, Tiv na Urhobo, ha kwukwara. Agbanyeghị, ọ chọrọ “ndị na -asụ asụsụ ndị ahụ iji nyere anyị aka melite ogo nke ntụgharị asụsụ anyị” ka enwere ike itinye ha n'ọrụ.
Biyela kọwara, "Echiche buru ibu bụ ikike sayensị nke ọdịbendị. Ma ya na Abbott na -ekwu na ọ dị mkpa iji mebie sayensị site n'ikwe ka ndị mmadụ mee nyocha ma kwuo maka sayensị n'asụsụ nke ha. N'oge a, ọ ga -ekwe omume iji asụsụ Afrịka kwuo maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na egwuregwu, mana ọ bụghị sayensị, Biyela kwuru.
N'otu aka ahụ, Bekee bụ asụsụ na -ahụ maka nlekọta na nchekwa gburugburu - mana ọ gwụla ma ndị mmadụ ghọtara ihe okwu na echiche dị iche iche pụtara ma nwee ike ikwu maka ha n'asụsụ obodo ha, ha nwere ike chee na ha nwere njikọ na mbọ gọọmentị na -echekwa gburugburu ụwa na ụdị, Bheka Nxele kwuru. , onye njikwa mmemme maka gburugburu ebe obibi mweghachi, atụmatụ gburugburu ebe obibi na nchedo ihu igwe na mpaghara eThekwini nke South Africa.
Ndị na -eme nchọpụta na -enwe nchegbu na ọ bụrụ na etinyeghị asụsụ Afrịka na algọridim dị n'ịntanetị, na ha nwere ike mechaa kwụsị ma chefuo ya. “Ndị a bụ asụsụ [ndị mmadụ] na -asụ. Ndị a bụ asụsụ ha na -asụ kwa ụbọchị, ha na -ebikwa na -ahụ nke bụ eziokwu n'ime x nọmba afọ, asụsụ ha nwere ike ịnwụ n'ihi na enweghị akara dijitalụ, "Siminyu kwuru.
Categories:	ọkwaNjikọ AkaDdị Asụsụ
Tags: Sayensị Decoloniseasụsụ dịgasị icheMasakhaneNaturepịaTụgharịa Sayensị